China ziyabengezela Lapel izikhonkwane mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Izinto ezibengezelayo zenziwe ngamanqwanqwa amancinci amancinci (aqhelekileyo ubukhulu bepepile) abonisa ukukhanya.
Sazi ukusuka kwisikolo samabanga aphantsi ukuba ubumenyemenye bunento yokwenza nemisebenzi yezandla okanye imihombiso yeKrisimesi.
Ngenxa yesiphumo sayo esihle, i-glitter ikwasetyenziswa ngokubanzi kwizikhonkwane zeBhola yeBhola, ezithengiswa rhoqo ngonyaka eCooperstown, ePennsylvania
Yiza ukubetha kwiikhonkwane zakho usebenzisa i-glitter
I-Glitter ihlala isetyenziselwa ukukhulisa igama leqela okanye ukuhombisa imascot yayo, iza ngemibala emininzi, kubandakanya obomvu, bhlowu, tyheli, luhlaza, orenji, pinki, mnyama, mhlophe njalo njalo.
Akukho mfuneko yokunciphisa ukhetho lwakho kwindawo enye. Ungabeka ubumenyemenye naphi na apho uthanda khona. Ngokwesiqhelo, iindleko zesiko ngalinye ziisenti ezili-15. Nangona kunjalo, umzekelo, ukuba ufuna ukukhanya ipini yakho yokurhweba esibhakabhakeni nakwimascot, iya kubiza i-30 ngepini nganye njengoko idityaniswa kwiinkcukacha ezingaphezulu kwesinye. Ngapha koko, uyabona, yonke into ebengezelayo igolide.
Ibamba ukukhanya kwelanga kwaye yenza ukuba isikhonkwane sakho sokuthengisa sikhanye! Obunjani ubukhazikhazi obuthathwa ngokuba buxabisekile!
Ukuqaqamba kwephini, kokukhona abanye abadlali befuna ukuyitshintsha!
Uphawu olungumgubo weflash kukuphucula ukubonwa kwemveliso, ukuze amalungu okuhombisa abe nemvakalelo ekrwada kunye nembono engaphezulu-ntathu.
Iimpawu zayo zezi: ukukhanya okuphezulu kwesibane kwenza umhombiso ube mhle ngakumbi, uqaqambe ngakumbi kwaye ucace elangeni. Benza iziphumo ezizodwa, ezinomtsalane, njengokuhombisa okanye ukubonakalisa.
Alithandabuzeki elokuba sinokongeza umbala we-enamel okhanyayo ukwenza izikhonkwane zakho ze-enamel zikhanye.
Sihlala sikhetha umbala we-flash powder ekufuphi kwisiphumo sokubonakalayo ngokwekhowudi yombala engqina uyilo lwakho.
Nangona kunjalo, kule meko yesiqhelo, umgubo odanyazayo uya kukhanyisa eminye imibala, ke iya kuba sisithuba phakathi kwengcamango yakho yoqobo yokwaleka koqweqwe lwawo.
Apha, abo bafuna ukugqibelela kufuneka banike ingqalelo engakumbi kule ndawo;
Ukuba ufuna lo mbala uqinileyo weflash powder, okanye umbala othile weflash powder, ukunqanda iingxaki ezizayo, nceda ubuze abasebenzi bethu bokuthengisa ukuba bakunike imizobo yesampulu yokuqinisekisa ngaphambi kokuveliswa kobuninzi bezikhonkwane ze-glitter enamel.
Egqithileyo Iphrinta yedijithali yelinen pin
Okulandelayo: Ukukhanya kwizikhonkwane eziMnyama eziMnyama
Iphini yoshicilelo lwedijithali